Sei iyo Forex Lens MAM Akaunti yakatengeswa? - Forex Lens
Sei iyo Forex Lens MAM Akaunti yakatengeswa?
Forex Kutengesa Blog, Urarame Bhuku Rekushandisa
Munguva pfupi yapfuura, taive nemutengi email yedu nerondedzero yemibvunzo yeJon Morgan, uye nemabatirwo eakaitwa MAM account.
Takaendesa email kuna Jon uye iye akamupindura. Ipapo isu takafunga kuti hey - pamwe vazhinji venyu vakomana vanogona kunge vaine mibvunzo yakafanana, asi takatya kubvunza. Zvakanaka, isu takasarudza kugovera iyi email newe uye tinovimba ichakupa iwe zvese zvaunoda kusarudza kana yedu yakachengetedzwa Akaunti sevhisi yakakodzera iwe!
Mimwe yemibvunzo yaive nemutengi yaive maererano ne:
1. Njodzi Management Strategy
2. Inotarisirwa Dhirowa-Pasi
3. Shandisa / Kushaikwa kwekushandisa Stop Stop Loss
4. Kuchengetedza Guard
Kutanga, ndinokutendai nekundibata kwandinoita, nezvokurumbidza kwako uye mibvunzo yako. Ndokumbira usazombonzwa kutya pamusoro pekusvika kwandiri kuna Forex Lens. Ini ndinonzwa zvichikodzera kwandiri kuti ndigamuchire kunetseka kwako uye kupindura chero mibvunzo yandinokwanisa - imari yako panjodzi! Rega ndipindure mibvunzo yako:
Dhizaini maitiro uye maitiro: Ini handizive kana iwe uri nhengo yekamuri yekutengesa kuimba Forex Lens, asi ini ndiripo mazuva ese Muvhuro - Chishanu (minus imwe nguva yekubuda kana yega emergency emergency) kubva pa0730 CST kusvika pa815ish CST. Ini ndinotaura nezve machati, mabasa uye mabasa andinotora ndinoisa pane masaini peji. Unogona kundibvunza mibvunzo mukati imomo zvakare.
Saizi Yakakura: Kana paine chinhu chimwe chete pamusoro pemhando yangu yekutengesa inoyerera chaizvo uye ine simba, iwo iwo mare yakawanda. Ini ndinosara ndine mhando mbiri dzezvikamu izvo zviyero zvakawanda zvichawira pasi. Kana musika uchizotanga maitiro matsva / kudhonza / kururamisa, chekutanga chinzvimbo mune icho setup chinopa huwandu hwakawanda hwemabhenefiti makuru - iyo inosanganisirwa neiyo yakawanda huwandu hwekukwirisa uye njodzi. Mukuita, vatengesi vachange vaine madiki madiki madiki.
Dhizaha: Mumwe wevanoparadza zvikuru maakaunti ekutengesa kutya kweyezvino chiyero uye 'nhamba' iri pamapepa. Kana iwe ukaita bhizinesi uye uchinetseka pamusoro pemari kana kurasikirwa kana dhirivhari, iwe watove kurasikirwa kutengeserana. Panogona kunge pasina zvachose kusagadzikana nezve kutengeserana kana kunetseka nezve kurasikirwa - iwe unofanirwa kutenda iyo mari yauri kuisa pangozi yekutengeserana isipo. Ndicho chikonzero chikuru vatengesi vazhinji vanorasikirwa: vanotya kusagadzikana kwavo uye vanosiya kutengesa kutanga. Zvino, izvo zviri nyore kutaurwa pane kuzviita. Ndichiri kunetseka dzimwe nguva, asi kazhinji, ndagadzira ganda rakasimba - ndinofunga ndakangojaira kunzwa kwakabatana nemari kurasika kana mukana wekuti wakarasika ndatojaira! Kubvumbi yaive mwedzi inonyengera, inonyengera. Kazhinji kazhinji mwedzi unonyengera, asi zvakadaro wakabuda mberi. Hazvirasikirwe pandiri 'kuvhunduka' vamwe vanobata account vanganzwe uye ibasa rangu kuti vanhu vese vazive, 'hee - hongu - zvinotyisa, asi chinamira mukati umo'. Zvekare, vanhu vazhinji vanouya kuzoshumirwa seMAM account nekuti ivo vaona kuti kunyatso kutengeserana zvisingaite, saka vanokumbira mumwe munhu seni kuti ndivaitire ivo! 🙂
Stop-Kurasikirwa: Izvi zvinosiyana zvinoenderana nemanje musika simba, maitiro, mwaka, mwedzi uye kutenderera. Zvinotora nguva yakareba kupindura kunyora, asi kunyangwe kushandiswa (kana kushomeka) kwekumira kuchioneka kunge kwanga kuri, hakuna. Zvinotaridzika chaizvo zvisina tsarukano uye zvine simba neyekumira ndiyo imwe yezvakanyanya nzvimbo yekutengesa kwangu. Kwezhinji chikamu, zvakadaro, ini handifarire kushandisa zvimisa: iwo matikiti emahara evabhureki uye ekuita nematafura. Ini ndinofarira kumira kwepfungwa. Asi ini ndino tarisa nhoroondo yacho siku nesikati (mukadzi wangu anogara akatsamwiswa neni!). Ini ndinotogadza zvekuzivisa husiku kana ndarara kana pandinenge ndichiroja. Ini ndinogara ndichiwana iyo account. Kana ini ndikatombogona kuwana, iyo account yaisazofumurwa (kana kuti yaizove, asi nekushomeka kudiki).
Kuchengetedza Guard: Ichi zvakare chimwe chinhu chandisina hanya kuti titarise kana kuti tirambe tichiona. Chimwe chezvinhu chandinotaura kakawanda nevatengesi vatsva uye Forex Lens yekutengesa imba vanyoresa ndeyekuti kutarisa pahuremu yako ingori nzira yekuwedzera yako kurasikirwa. Kana iwe uine kuraira kwekutengeserana kudiki uye kugadzirisa njodzi yako / yakawanda saizi, haufanirwe kutarisa teerera kutengeserana kwako. Iwe unogona kunge usingazive izvi, asi chaizvo iri zano rinoitwa nevabati uye vanogadzira: gara uine chiyero chinoratidzwa pachiratidziro - chinokuchengeta uri mumucheto. Zvinokuchengetedza iwe. Zvinoita kuti ugare uchifara. Inoita kuti uve netariro, unokara, unotya uye unotya. Chiyero chako ndiwo mamoni, unofanirwa kuiongorora zvakakwana kuti uve nechokwadi chekuti hauchakwanisi kupera ammo - usazvinetsa nekuchikurisa. Ini ndinotarisa pakugadzira kutengesa kunohwina - ndicho chinangwa uye chega chiyero chengetedzo chinodiwa.
Ndinovimba ino inopindura mibvunzo yako yakawanda (handizive kana ndakavarova vese, ndiudze kana ndisina!).
Uye zvekare, usazengurira kubatana neni / isu - waisa mari yako panjodzi nemuenzi akazara netarisiro yekuti iyo mari yawakaisa haizove shoma kana iwe uchiibvisa!
Iva nezuva rakakomborera,
https://www.forexlens.com/wp-content/uploads/2018/06/Forex-Lens-Multi-Account-Managment.jpg 533 1000 forexlens https://www.forexlens.com/wp-content/uploads/2018/01/forex-lens-logo-expert-forex-signals.png forexlens2018-06-11 00:44:552018-06-11 15:46:14Sei iyo Forex Lens MAM Akaunti yakatengeswa?
Kudzidzira Maitiro Ekutengesa Forex - Tale yeVadzidzi Vaviri Inogona Kutsiva yeUS Dollar Index (DXY)